ကယ်လီဖိုးနီယားတောင်ပိုင်းမှ မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်လူမျိုးများဧ။် စုပေါင်းအလှူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ကယ်လီဖိုးနီယားတောင်ပိုင်းမှ မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်လူမျိုးများဧ။် စုပေါင်းအလှူ
ကယ်လီဖိုးနီယားတောင်ပိုင်းမှ မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်လူမျိုးများဧ။် စုပေါင်းအလှူ
Posted by etone on Sep 10, 2013 in Community & Society, My Dear Diary, Myanmar Gazette | 16 comments
Dozen Plus မှ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့ ၊ နေ့လည် (၂)နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ လသာမြို့နယ်၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်ရှိ Myanmar Chinese Chamber of Commerce တွင် ၊ အမေရိကပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လိုဖိုး နီးယားပြည်နယ်နေ မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်လူမျိုးများစုပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိလူမှုရေးလုပ်ငန်းများ လှုပ်ရှားလျှက်ရှိသော အဖွဲ့စည်းများထဲမှ ၊ NPO (Non Profit Organization) အဖွဲ့အစည်း (၆)ဖွဲ့အား အလှူငွေပေးအပ် လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနား တစ်ရပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းအခန်းအနားတွင် သဘာပတိအဖြစ် ဦးရေမွန်ချစ်ကလည်းကောင်း၊ အခမ်းနားမှူးအဖြစ် ဒေါက်တာဇော်ထွန်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်း၌ နေထိုင်သူမြန်မာပြည်ဖွားတရုတ်လူမျိုးများစုပေါင်းပြီး နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းတွင် မိမိတို့မွေးဖွားရာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်လာရောက်ကြပြီး တွေ့ဆုံပွဲများပြုလုပ်လေ့ ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
ယခုအကြိမ်သည် (၇)ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုတွေ့ဆုံမှုအတွက် စုပေါင်းပြန်လည်လာရောက်သူ (၆၈)ဦးရှိ ကြောင်းလည်းသိရပါသည် ။ ယခုနှစ်တွင်မှ ပထမဆုံးစံနမူနာပြအနေဖြင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများသို့ ဆက်သွယ်စုပေါင်း လှူဒါန်းကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာသိရှိရပါသည်။
ပြည်ပရောက် မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်လူမျိုးများသာမကပဲ ၊ မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်ကြသော တရုတ်လူမျိုးများပါ လူမှူရေးလုပ်ငန်းများကို တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးစေလိုသော ဆန္ဒမွန်ဖြင့် ယခုပွဲအားစံနမူနာအဖြစ် ပြုလုပ်နှိုးဆော်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိရပါသည်။
အခမ်းအနားအနေဖြင့် အခမ်းအနားမှူးမှ အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေငြာပြီးနောက်၊ သဘာပတိဦးရေမွန်ချစ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် ပရဟိတအဖွဲ့  (၆)ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များက အသီးသီးမိတ်ဆက်စကားပြောကြား ပြီးနောက်၊ အလှူငွေများကို လက်ခံခဲ့ပါသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှ မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်လူမျိုးများက ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၆၀၀)စီလှူဒါန်းခဲ့သလို၊ အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာသော တရုတ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဥက္ကဌ ဦးကြီးစိန်မှလည်း လှုပ်ရှားနေကြသော ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့များအား ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာသဒ္ဒါတရားထက်သန်စွာဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀၀)စီကို ထပ်မံလှူဒါန်းသွားခဲ့ပါသည်။
တရုတ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးမြင့်ရွှေမှလည်း ထက်သန်စွာဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀၀)စီကို ထပ်ဆောင်းလှူဒါန်းခဲ့ပါသေးသည်။
ထို့နောက် ပရဟိတအဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များက ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့အပြီးတွင် LA ၏ ခရီး သွားလာရေးအဖွဲ့ကိုယ်စား မစ္စတာအယ်ဒီလင်းက ပရဟိတအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၀)စီ ထပ်မံလှူဒါန်းခဲ့ခြင်းအား ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံကြပြီးနောက် အခမ်းအနားမှူးမှ အခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်းကြော်ငြာကာ အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ NPO အဖွဲ့စည်းများဖြစ်ကြသော ကျိုက်ဝိုင်းလူငယ်မသန်စွမ်းကျောင်း ၊ မေရီချက်ပ်မင်းဆွံ့အ နားမကြားကျောင်း ၊ ဗဟိုလမ်းမှ မျက်မမြင်ကျောင်း ၊ လှိုင်သာယာမှ အောင်ပရဟိတမိဘမဲ့ကလေးများ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း ၊ ပုသိမ်မြို့နယ် သာပေါင်းမြို့ မှ ပရဟိတအဖွဲ့ (၄)ခုစုပေါင်းထားသော ပန်းပျိုးလက်အဖွဲ့နှင့် မန္တလေးဂဇက်အွန်လိုင်းစာမျက်နှာမှ စတင်စုစည်းမိကြသော ဒါဇင်ပလက်(စ)အဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ အသီးသီး တက်ရောက်အလှူငွေ လက်ခံခဲ့ကြပြီး ၊ နိုင်ငံပိုင် ပြည်တွင်း မီဒီယာအချို့ ၊ ပုဂ္ဂိုလိကပိုင် မီဒီယာအချို့ ၊ တရုတ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် သတင်း မီဒီယာအချို့တို့ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ဒါဇင်ပလက်စ် ပညာရေးကူညီမှုအဖွဲ့ ကို ၀ါသနာတူ မန္တလေးဂဇက်အွန်လိုင်း စာရေးစာဖတ်သူများနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လက စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပထမဆုံးအလှူကိုတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လမှာ စတင်ခဲ့ကြပါသည် ။ အမြဲတမ်းအလှူရှင်များနှင့် သဒ္ဒါပေါက်အလှူရှင်များဧ။် ပေါင်းစပ်အင်အားဖြင့် လစဉ် စာရေးကိရိယာများ၊ ပညာသင် ထောက်ပံ့ငွေများကို လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ယနေ့အထိ (၁၄)ကြိမ် လှူဒါန်းပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
အနာဂတ်၏ အသီးပွင့်လေးများဖြစ်ကြသောကလေးငယ်များအတွင်းမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောကလေးငယ်များ၏ပညာရေးကို ဘာသာရေး ၊ လူမျိုးရေး မခွဲခြားပဲ တဖက်တလမ်းမှ အထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါကလေးငယ်များကို ပညာသင်ပေးလျှက်ရှိနေသော ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းများ ၊ သီလရှင်ကျောင်းများနှင့် အခြားသော ပညာရေးဌာနများသို့ လစဉ် စာရေးကိရိယာများနှင့် ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေလှူဒါန်းအားဖြည့်လျက်ရှိနေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဇင်ပလက်(စ)အဖွဲ့ မှ စုဆောင်းရရှိလာတဲ့အလှူငွေများကို လအပိုင်းခြား အလိုက်ခွဲခြား လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ၊ မိမိတို့ကိုယ်ကျိုးနှင့် အဖွဲ့လည်ပတ်ငွေအတွက် တပြားတချပ်မှထုတ်ယူသုံးစွဲခဲ့ခြင်းမရှိသလို၊ အထွေထွေ အသုံးစရိတ်နှင့် သွားရောက်လှူဒါန်းသောခရီးသွားလာစရိတ်များအတွက် ရံပုံငွေဈေးရောင်းပွဲကိုလည်း ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ၂၀၁၃ခုနှစ် ၊ မေလ (၁)ရက်နေ့က ၊ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်အတွင်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၀ါသနာတူ စာရေးစာဖတ်သူများစုစည်မိပြီး၊ ယခုကဲ့သို့ ပရဟိတလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အခွင့်အလန်းအဖြစ် လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သော မန္တလေးဂဇက်အင်တာနက်စာမျက်နှာတည်ထောင်သူနှင့် စာမျက်နှာအားစီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်သော သဂျီး ဦးခိုင်အားလည်းကောင်း၊ သဂျီးသည်ပင် ယခုကဲ့ကို့ဒါဇင်ပလပ်(စ)အလှူငွေလက်ခံရရှိနိုင်အောင် ဆက်သွယ်ခဲ့သူလဲဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ ဒေါက်တာ ဇော်ထွန်းဆိုသူမှာလဲ မန္တလေးဂဇက်ပုံနှိပ်သတင်းစာ၏ နာယကဟုလည်း သိရှိရပြီး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုအတွက် ဒါဇင်ပလပ်(စ)မှ ဒီနေရာကနေကျေးဇူး အထူးပင် တင်ရှိပါသည် ။
ဒါဇင်ပလပ်(စ)သို့ အလှူငွေများ၊ ပေးပို့လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် နွမ်းပါးသူကလေးငယ်များ၏ ပညာရေးအထောက်အပံ့ကို အားဖြည့်ပေးပါသော မန္တလေးဂဇက်ဝင် မိတ်ဆွေအသစ်များ၊ အဟောင်းများ၊ စာဖတ်သူများနှင့် ပြင်ပလောကတွင် သိကျွမ်းရင်းနီးခဲ့ခြင်းမရှိပါပဲ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ယုံကြည်စွာ လက်တွဲလှူဒါန်းလာကြသူများအားလုံးကို လည်း ကျေးဇူးတင်မိပါသည် ။
ဒါဇင်ပလက်(စ)နှင့်အတူ နွမ်းပါးသူကလေးငယ်များ၏ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကို တဖက်တလမ်းမှ အားဖြည့်ပါဝင်လိုပါလျှင် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်ပြီး ဒါဇင်ပလပ်(စ)နှင့်လက်တွဲနိုင်ပါသည် ။
Phone : 095081969, 095041643, 095180631, 0973144421, 0973189261, 09420143290
ဒါဇင်ပလပ် အဖွဲ့ဝင်များရော၊ သူတို့ ကို ပံ့ပိုးသူ၊ သူတို့ က ပံ့ပိုးသူ များပါ အားလုံး စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာ ရှိကြပါစေ။
၀မ်းသာ ကြည်နူး ပီတိ တွေနဲ့ ဂုဏ်ယူမိပါရဲ့
အောင်မြင် သည်ထက် အောင်မြင်ခြင်းသို့ တက်လှမ်းနိုင်ပါစေ ဒါဇင်ပလပ်ရေ။
သာဓု… သာဓု… သာဓုပါ၊ ယခုပြုသမျှ ကုသိုလ်ဒါနအစုစုတို့၏ အကျိုးအားကြောင့်…
စား၍မကုန် လှု၍မခမ်း စီးပွါးဥစ္စာတိုးတက်ပြီး၊ အခက်အခဲမှန်သမျှ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ…
နိဗ္ဗာန်ဆော် ဒါဇင်ပလပ်(စ)များလည်း ကြီးပွါးတိုးတက် အောင်မြင်ကြပါစေ…
အလှူဖြစ်မြောက်အောင် စိတ်အား လူအား စိုက်ထုတ်ထားသူများရော…
အလှူကိစ္စ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသူများရော ….
ဒါဇင်ပလပ်စ်ရဲ့ စေတနာကို လေးလေးနက်နက်
ဒါဇင်ပလပ်စ် အဖွဲ့သားများအတွက် စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရလဒ်ကို ခံစားရတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ရှေ့ဆက်လုပ်ရမဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေမှာလဲ အစဉ်လာမပျက် အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ngo တွေဘာသာရေးအနှောင့်အသွားတွေ… ကင်းစေချင်တယ်…
လောလောဆယ်တော့.. သာဓုပါဗျာ… လို့ပဲ..။
ဟီး …. တိသားဗဲ .. တဂွေ့ဂွေ့တော့ … သဂျီးပျော့စ်တော့မယ် ဆိုဒါ …. ။
ဒါဂ ဂလို ချိတယ် သဂျီးရဲ့ …တူညား အဖွဲ့တွေတော့ မတိဝူး .. သများတို့တော့ တတ်နိုင်သမျှ ဘာသာရေးအစွဲနဲ့ မလှူပေမယ့် ….. လှူဖို့ ရှာလိုက်လျှင် ဘကကျောင်းတွေနဲ့ သီလရှင်ကျောင်းတွေချည်းရောက်ရောက်သွားတယ် … ။
ဒါဂလည်း ဂလို ချိဗျန်ဘာတယ်ချင့် …. ဘကကျောင်းမို့လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကိုပဲ စာသင်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ၊ ဘာသာခြား ခရစ်ယာန် နဲ့နတ်ကိုးကွယ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားဘာညာ ဘုစုခရုကစလို့ …. (အသားမည်း ၊ဖြူ ၊ လတ်မရွေးပဲ) မိဘမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့တွေကို ပညာသင်ခွင့်ပေးထားတာကြောင့်ပါ …. ။ ကျောင်းတိုင်တွေနဲ့စကားပြောတုန်းကလည်း မေးခဲ့ဖူးပါတယ် ။ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးတွေအပေါ် ဒီလို စည်းမျိုးမရှိပဲ နွမ်းပါးပြီး စာသင်ချင်တယ်ဆို သင်ခွင့်ပေးထားတာမျိုးပါ … ။
ကျောင်းရွေးချယ်ဖို့ ရှာတဲ့အခါ … ဘကကျောင်းတွေက တခြား ဘာသာကျောင်းတွေထက်များနေတာကြောင့် … ၊ အဲ့ဒီတွေချည်းရောက်ရောက်သွားဖြစ်ပါတယ် … ။
အကျိုးကြောင်းသင့်တဲ့အခါ ဘာသာရေးအစွဲမပြုပဲ .. ကျောင်းသားလက်ခံနေတဲ့ ဘာသာခြားတည်ထောင်တဲ့ကျောင်းမျိုးကိုလည်း သွားလှူချင်ပါသေးတယ် ။
တိုင်းရင်းသားဒေသက.. ကလေးတွေကို.. ထိတ်တန်းဦးစားပေးသင့်တာပေါ့…။
ဒါမျိုးကမှ.. (သာသနာပြုချင်တယ်ဆိုရင်တောင်) ဘကကျောင်းတွေလှူနေပေးနေတာထက်.. အများကြီး… ပိုထိရောက်တာမျိုးပဲ..။
ဟုတ်ကဲ့ … အဲ့လို ဒေသက ကလေးတွေအတွက်လည်း အကျိုးပြုချင်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် လတ်တလော အခြေနေက အခက်ခဲလေးတွေ ရှိပါသေးတယ် … ။ တဖြည်းဖြည်းချင်း …. ကြိုးစားရပါဦးမယ် ။
တကယ်တော့ သံလျှင်လိုသိပ်မဝေးတဲ့ ကျောင်းမျိုးသွားတာတောင် transportation charge ကို အမာခံ အလှူရှင်တွေ စုစိုက်ပြီး သွားရတာမျိုးပါ ။မြို့ပြင်ပဲ ထွက်ထွက် ၊ မြို့တွင်းကိုပဲ သွားသွား စုရပ်ကို ရောက်ဖို့ သွား/ပြန်ရတဲ့စရိတ် ၊ ဒီလိုပါပဲ စာရေးကိရိယာဝယ်ပြီး သယ်ယူစရိတ် ၊ အသက်သာဆုံး ဆိုင်တွေကို မေးပြီး ၀ယ်တဲ့အခါ သွားရတဲ့ စရိတ် ၊ လှူမယ့်နေရာတွေကို ဖုန်းဆက်ပြီး အင်ကွာရီလုပ်ရတဲ့စရိတ် ၊ တချို့ကိုယ်တိုင် လိုက်ချင်တဲ့ အလှူရှင်တွေကို ဆက်သွယ်ရတဲ့ဖုန်းဆက်ခ … ဒါတွေက … တို့ထိ တို့ထိ နဲ့ မများဘူးဆိုပေမယ့် အလှူရှင်တွေလှူလိုက်တဲ့ ငွေထဲက တပြားတချပ်မှ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း မရှိတာကြောင့် ဒါဇင်ပလပ်စ်က လူတွေဝိုင်းစုစိုက်ခဲ့တာချည်းပါပဲ ။ ဒီလို စုစိုက်ရင်း စည်းလုံးခဲ့ကြလို့ ၊ တလပြီး တလဖြတ်ကျော်ရင်း ၁၄လမြောက်ထိ လှူပြီးခဲ့ပါပြီ …. ။
သို့သော်လည်း ဒါဇင်ပလပ်စ်က လူတွေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကနေ ရတဲ့ ၀င်ငွေချင်း မတူတာကြောင့် ၊ အချိုးကျ စိုက်သည့်တိုင်အောင် အကြိမ်ရေ များလာတဲ့အခါ စိတ်ထက်သန်မှုအားလျော့ပြီး အဆင်မပြေ ဖြစ်လာမှာကိုတွေးပြီး စိုးရိမ်ခဲ့ကြလို့ …. အထွေထွေ အသုံးစရိတ်တွေကြောင့်လည်း ပထမဆုံး ရန်ပုံငွေရှာပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
သာဓု အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်ပြီး
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ပါ ဒါဇင်ပလပ်စ်ရေ။